Ciidamada gadoodsan oo iska soo dhex saaray guddi ka wakiil ah | KEYDMEDIA ONLINE
8 May 2021 RW hore oo soo dhaweeyay dib usoo nooleynta xiriirka Kenya
Ciidamada gadoodsan oo iska soo dhex saaray guddi ka wakiil ah
Kulamo looga arrin-sanayay xal u helidda ciidamada gadoodsan ee ka hor yimid muddo kordhintii uu Golaha Shacabka u sameeyay Farmaajo ayaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dhowr is arag oo kala duwan ayaa afurkii kadib xalay ka bilowday Caasimadda, waxaana looga hadlay macquul ahaan shaha Ciidamada la baxay magaca Badbaadada Qaranka, looga saari karo Muqdisho.
Odayaal, Xildhibaanno, Saraakiil iyo Siyaasiyiin ayaa guda galay xal u raadinta arrintaan, waxaana warbixin kooban laga dhageysatay Guddi ka kooban 7 Xubnood oo ay iska soo saareen ciidamada Farmaajo diidan.
Waxaa lagu heshiiyay in guddigaan 7 Xubnood ka kooban ee matala Ciidanka badbaado Qaran ay hor fariistaaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta ee Rooble, iyo dhammaan xubnaha Mucaaradka.
Guddigaan waxa ay hoosta ka xariiqeen In Xukuumadda Rooble ay ka laabato go'aankii ay Ciidanka muddo korarsiga kasoo horjeeda ay ugu yeertay Meeleshiyaad.
Waxa ay dalbadeen in RW Rooble, uu xilka ka xayuubiyo hoggaanka Ciidamada, Sida Odawaa, Biixi, Fahad, Xijaar, Qaroole, Kaniif iyo kuwo kale, si loo dadajiyo isku soo dhawaan shaha labada dhinac.
Waxa ay ka digeen beegsi gaar ah iyo in la jaro mushaaraadka ciidamada diiday muddo kordhinta.
Xubnahaan ay iska soo dhex saareen ciidamada gadoodsan ayaa kala 1. Gen. Saadaq John, 2. Gen. Gacma Dulle, 3. Gen. Indha Cadde, 4. Kornayl: Saney Cabdulle, 5. Kornayl: Ismaaciil Gurey, 6. Kornayl: Xaadoole, 7. Kornayl: Liibaan Madaxweyne.
Wada hadallada ayaa la filayaa in ay sii socdaan, inta laga gaaro xal dhamaystiran, oo si buuxda ciidamadu ugu qancaan.
RW hore oo soo dhaweeyay dib usoo nooleynta xiriirka Kenya
Warar 8 May 2021 10:43
Cumar C/rashiid oo Ra'iisul Wasaare soo noqday labo jeer dowladihii Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid wanaagsan oo sare u qaadeysa ganacssiga iyo isku socodka.